Europe v Google: Sidee Android noqday dagaal ah - Rule News
Europe v Google: Sidee Android noqday dagaal ah
Midowga Yurub ayaa ku eedeeyay Google ah ku aflagaadeeyay ay awood suuqa casriga ah ee. Waa maxay sababta uu waxaas tan waxan samaysay? Oo waxa ay dhab ahaan waa Android?
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Europe v Google: sida Android noqday dagaal ah” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Wednesday 20 April 2016 13.09 UTC
Guddiga Yurub waxay leedahay eedeeyay Google ah ku aflagaadeeyay ay awood suuqa casriga ah ee dhex Android, xanibeen tartanka hal-abuurka iyo. Laakiin waa maxay Android, waxa sameeya Google dalab iyo waxa dadka kale samaynaya la Android?
Android waa nidaamka mobile hawlgalka in waddaa on badan 80% ee casriga ah ee dunida, sida lagu sheegay xog ka caansiirisay, laakiin waxaa jira wax ka badan hal version of Android.
Google waxay bixisaa laba versions. marka hore waa nidaamka hawlgalka xudunta u yeedhay Project Android Open Source (AOSP). Waa il-furan, xor ah oo qof in ay isticmaalaan, isbeddel, beddelo ama la qabsan waayo ficil ujeeddo kasta.
Laga soo bilaabo casriga ah iyo kiniiniyada in qalabka gundhig sida dareemayaal, talaajad, baabuurta iyo mashiinada warshadaha, AOSP ayaa doorsoon badan, noocyo badan.
version ee AOSP laga yaabaa in aad ku soo gaarto UK ama US waxaa socda on kiniiniyada Fire Amazon ee. Amazon qaaday AOSP oo la dhisay waxa ay ugu baaqaysaa Fire OS ka, oo ay ku jiraan adeegyada Amazon iyo apps, kartoo in si gaar ah ay maamulaan on waxyaabaha Dabka ee shirkadda, lugu daro TV Naarta, kiniiniyada Fire iyo jirran ee dhicisoobay Phone Fire.
waayo-aragnimo Android Google
Si tagaan oo ay la socdaan AOSP, Google ayaa sidoo kale bixisaa ay Suite of Chine iyo adeegyada, taas oo ka mid ah Play Store Google in waxaa ka buuxa codsiyada dhinac saddexaad.
Inta badan oo ka mid ah casriga ah Android ama kiniin iibin UK, US ama EU la Google ee Suite of Chine iman, oo waa version of Android ugu noqon doontaa yaqaanaan.
Iyadoo AOSP waxaa loo isticmaali karaa si xor ah ujeeddo kasta, Suite app Google ee ma karo. Waxaa la iman taxane ah oo xaaladaha ay tahay in la kulmeen Google in ay shatiga isticmaalka app ah si ay u soo saarayaasha qalabka.
Waxaa jira 11 apps wadar ahaan gudahood Google ee Suite of Chine, kuwaas oo aan ka mid ah kuwo kale oo badan in dalab shirkadda. Kuwaas waxaa ka mid:
Play Movies Google
Si loo ogol yahay in ay ka hor-rakibi Store Google Play on qalab, saaraha ah sidoo kale waa in dhammaan pre-rakibi 11 oo ka mid ah barnaamijyadooda Google. Google ma xaddido saarayaasha ka pre-rakibidda kasta barnaamijyadooda kale, Samsung pre-rakibtay qaar ka mid ah barnaamijyadooda Android Microsoft ee casriga ah Galaxy ay tusaale ahaan, laakiin 11 apps Google waa in lagu dhejiyaa.
Marka in ka badan hal codsigaaga la rakibay oo wada qaadan kara hawl gaar ah, sida laga faaiidaysanayo on link a email, Android weydiin doonaa user ah oo ka mid ah Chine, kuwaas oo ay doonayaan in ay isticmaalaan si ay u qabtaan hawsha. In the case of siyoodba on a link on mid ka mid ah telefoonada Galaxy Samsung ayaa in ay leeyihiin browser shirkadda Korean ayaa lagu rakibay, waxay ku weydiin doonaan haddii user uu doonayo in la furo link ee Google Chrome ama Samsung ayaa browser, iyo haddii ay rabto in aad isticmaasho app isku mid ah oo dhan links mustaqbalka.
A screen guriga Motorola Moto G Android, bandhigeen bar Search Google, Google Play Store icon iyo Google Apps folder Suite. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Google ayaa sidoo kale dhigaya a shuruudaha yar marka smartphone ama kiniin waxaa booted ilaa markii ugu horeysay. The sanduuqa Search Google waa in lagu meeleeyaa shaashadda marka hore guriga, sida waa icon ee Google Play iyo folder la apps kale Google.
Users waa lacag la'aan in ay tirtirto apps iyo raadin widget ka homescreen ah, laakiinse iyagu waa in ay jiri in lagu bilaabo.
Ereyga salka u ah cabashada EC ee ka dhanka ah Google waa in shirkadda uma oggolaan doono in ay ka mid saarayaasha Store Google Play, taas oo uu leeyahay ururinta ugu weyn ee xisbiga saddexaad-apps Android heli karaa, oo aan ku jiraan app Search labada Google, shirkadda ee Chrome browser iyo isagoo Search Google dhigay sida default.
The EC sheegay in dhaqankan "keeni karta in xoojinta dheeraad ah ee booska xukuma ee Google Search adeegyada internet guud search" iyo in ay "ka walaacsan in dhaqanka kuwaas oo saamayn ku yeelanayso awoodda ee ku tartamaya daalacashada mobile si ay ula Google Chrome tartamaan".
EC ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka walaacsan in dhaqanka Google ee "joogsan horumarinta nidaamyada hawlgalka ku salaysan Android code u furan il iyo fursadaha ay bixiyaan lahaa horumarinta Chine iyo adeegyada cusub".
Google ayaa sidoo kale lagu eedeeyay siinaya dhiirigelin lacageed si saarayaasha iyo wadayaasha telefoonka mobile on xaalad ka mid ah si gaar ah Pre-rakibidda Google Search on qalabka ay.
Google Android 6.0 dib u eegis Marshmallow: dheeraad ah oo ku safeeyey, gacanta weyn iyo nolol batari dheer
Android N: Google ayaa muujinaya mustaqbalka ee OS ee
kaa caawin karaa i dooran laptop ah oo raqiis ah?
10 dib cajiib Apple waa in ay tixgeliyaan for t ...
18994	8 alifbeetada, Android, Apps, Qodobka, Google, Telefoonada Mobile, News, Samuel Gibbs, Search matoorada, Software, Technology, UK Technology
← Brain aaladaha lagu caawiyaa Paralysed Man Seynisyahanno ku abuureen ah "Atlas of Brain ah" →